म त नेपाली क्रिकेटमा सम्भावना नै सम्भावना देख्छु- सुवास शाही
'धनगढी क्रिकेट लिगले खेल जगतमा नयाँ तरङ्ग ल्याईदिएको छ'
नेपाल क्रिकेटमा दिनप्रतिदिन सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । क्रिकेटबाट खेलाडीहरुले नेपालको शिर उच्च राख्ने काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका लागि र राष्ट्रकालागि निकै नै अपरिहार्य रुपमा रहेको खेलकुद त्यसमा पनि क्रिकेट निकै नै लोकप्रिय बन्नुमा नेपाली खेलाडीहरुको उच्च मिहेनत नै प्रमुख कारण हो । सरकारीस्तरबाट त्यति अभ्यास खेल नभए पनि धनगढीमा भने कहिले ‘होटल डिभोटी एसपिए कप’ त कहिले ‘धनगढी क्रिकेट लिग’को आयोजना गरेर धनगढीका युवा सुवास शाही क्रिकेटको विकासमा लागि परेका छन् ।
धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्षसमेत रहेका शाही क्रिकेट विकासको लागि तन–मनका साथ लागिपरेका छन् । उनी सुदूरपश्चिमाञ्चल ऐकेडेमीका निर्देशक पनि हुन् । उनले गरेको यस कार्यको अहिले चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही गर्न चाहने युवाहरु लागि सफलता हासिल गर्नु छ भने कडा मिहेनत चाहिन्छ ।’ आज तिनै क्रिकेटको विकास, उन्नयन र समृद्धिमा लागिपरेका शाहीसंग क्रिकेटकै पेरिफेरीमा रहेर यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानी ।
कस्तो प्रतियोगिता हो यो डिसिएल ?
डिसिएल पुरस्कार अर्थात आर्थिक हिसाबले देशकै दोस्रो ठूलो धनराशीको क्रिकेट प्रतियोगिता हो । यसमा ६ लाख २० हजार पुरस्कार राशी रहेको छ । यसपटक सगरमाथा सिमेन्ट डिसिएल ३ मा विजेता टीमले ३ लाख र उपविजेताले एक लाख पचास हजार पाउनेछ । त्यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार, प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले ५० हजार पाउने छन् । प्रतियोगिताको अनुमानित अर्च ५५ लाख रहेको छ । डिसिएल २ मा केवल २ लाखमात्र खर्च भएको थियो, भने अहिले २७ गुणा बढेको छ । यसैबाट बुझिन्छ कि यस खेलको महत्व कति बढेको छ भन्ने कुरा । अर्को कुरा १४ वर्षका खेलाडी राष्ट्रिय टिमका उत्कृष्ट खेलाडी मेहबुब आलमसँग खेल्दै व्यवसायिक बनेको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो । यो हाम्रोजस्तो उपेक्षित क्षेत्रका खेलाडीहरुका लागि ठूलो प्रेरणा हो । हामी ड्रिम टीम बनाउँदै छौं । जसलाई हामीले भविष्यमा नेपाली टीममा मुख्य रुपमा राख्ने सोच बनाएका छौं । सम्भावित नेपालका भविष्यका खेलाडी निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।
प्रतियोगिता र यसको उद्देश्यबारे थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘अक्सन’ का आधारमा खेलाडी छनोट गरेर क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ । विभिन्न टीममा टीम मालिकहरुले खेलाडीहरुलाई खरिद गरी आफ्नो टीममा राखेका छन् । यो नेपालमा अन्य खेलकुदमा पनि गरिँदैन । धनगढीबाट सगरमाथा सिमेन्ट डिसिएल–३ ले अक्सनका आधारमा खेल सञ्चालन गरेको छ । हामीले यसलाई नेपाली खेलकुदमा नमुनाकोरुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हौं । अक्सनका आधारमा सबै क्षेत्रमा खेलकुद हुने हो भने वर्षभरि खेलाडीहरुले अभ्यास पनि गर्न पाउँछन्, र पैसा पनि कमाउँछन् । धनगढीले यसरी खेलको आयोजना गर्न सक्छ भने अन्य क्षेत्रले किन सक्दैनन् ? सम्बन्धित निकायले किन गर्न सक्दैन ? गर्ने चाहना हुने हो भने पक्कै पनि यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ ।
सगरमाथा सिमेन्ट डिसिएल–३ मा चौध वर्षका खेलाडी पनि व्यवसायिक रुपमा क्रिकेट खेलिरहेका छन् यो पनि एउटा नमुना हो । आज खेलाडीहरु चालिस हजार पाउँदैछन् पछि विस्तारै एक लाख पनि पाउँछन् । अभिभावकहरुले आफ्नो बच्चालाई क्रिकेटर बनाउन चाहने दिन अब धेरै टाढा छैन । खेललाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ र यससँग जोडिएका अम्पायरहरुले पनि राम्रो ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । खासमा भन्नुपर्दा डिसिएल खेललाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै आयोजना गरिएको हो ।
निर्धारित उद्देश्यअनुसार लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढिरहेको जस्तो लाग्छ ?
अवश्य नै । सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी क्रिकेट लिगले खेल जगतमा नयाँ तरङ्ग ल्याईदिएको छ । मान्छेमा गर्न सक्ने आत्मविश्वास र आँट हुनुपर्छ । केही गर्छु भन्ने साहस हुनुपर्छ । गरे के सम्भव छैन र ? भन्ने कुराको सन्देश यसले दिएको छ । धनगढी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा क्रिकेटको राजधानी हो भन्ने पहिचान दिएको छ । सगरमाथा सिमेन्ट डिसिएल–३ ले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा यहाँका टोलटोललाई पनि चिनाएको छ । जस्तो क्याम्पसरोड, हसनपुर, चौराहा, अत्तरिया लगायतका टिमका नामले सबै टोलहरुको पहिचान बनाउने काम पनि गरेको छ । यस कुराले सबैमा आत्मगौरव बढेको छ ।
प्रत्येक टोल टोलका मान्छेहरु आज मेरो टोलको गेम भईरहेको छ भनेर हेर्न आईरहेका हुन्छन् । खेलाडीहरुलाई ताली बजाउँदै प्रेरणा दिने काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने, ‘मान्छेमा केही गर्ने चाहना हुनुपर्छ, लगाव हुनुपर्छ, सफलता हासिल गर्न गाह्रो छैन । आफ्नो क्षमता चिन्नुपर्छ । त्यसरी काम गर्दै जाँदा थकाई हैन उर्जा बढ्दै गईरहेको हुन्छ । होटल डिभोटी एसपिए कप राष्ट्रकै ठूलो धनराशीको क्रिकेट प्रतियोगिता पनि यसै क्षेत्रमा आयोजना गरिन्छ । त्यसले पनि हाम्रो पहिचान बनाउने काम गरेको छ र खेलाडीहरुलाई निकै प्रेरणा प्रदान गरेको छ । त्यस्तै हामी फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने योजनामा छौं, त्यो पनि अवश्य एकदिन सफल हुनेछ । किनकी हामी ड्रिम फाप्लाका लागि दत्तचित्त भई काम गरिरहेकाछौं ।
निजी क्षेत्रबाट यति ठूलो लिगको आयोजना गर्नु भएको छ, सहयोग र प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नुभएको छ ?
हामीले सधैँभरी सरकारको मुख ताक्नु हुँदैन । हामी पनि यस राज्यका जनता हौं, त्यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रका लागि केही योगदान पुर्याउनु पर्छ । राज्यले हामीलाई के दियो भन्दा पनि हामी राज्यमा के योगदान पुर्याउन सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने हो भने पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ । हामी क्रिकेटका विकासका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा काम गरिरहेका छौं । हामीले राम्रा काम गर्यौ भने राज्य पनि सहयोग गर्न आउँछ । त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात गर्नुछ या विकासको सुरुवात गर्नुछ भने आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो प्रतियोगिता गर्दा ब्यानर पाउन गाह्रो थियो । आज प्रायोजनका लागि सहयोग गर्नेहरु धेरै छन् । राष्ट्रकै ठूला ठूला ब्राण्डहरुको सहयोग पाईरहेका छौँ ।
यो लिगमा मैले पनि सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएका धेरै सहयोगी हातहरु हामीले पाएका छौं । दर्शकहरुबाट पनि निकै सहयोग पाएका छौं । टिकट काटेर गेम हेर्न दर्शकहरु आईरहेका छन् । धनगढीका दर्शकलाई देशका उत्कृष्ट दर्शक भन्ने गरिएको छ । अनुशासित भएर खेललाई राम्रोसँग साथ दिने दर्शकहरुका कारण पनि हामीले सबै क्षेत्रबाट राम्रो सहयोग पाएको आभाष गरेका छौं । यसले हामीलाई आर्थिक रुपमा पनि सहयोग मिलेको छ । यसरी खेलको आयोजना गर्दा धनगढीमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुने भएकाले रिक्सा चालकदेखि होटल व्यवसायीसम्मलाई फाईदा पुग्ने गरेको छ । यस्ता किसिमका खेलले समाजलाई माथि उठाउने विश्वास लिएको छु । राम्रो काम गर्दा सबैको साथ पाईदोरहेछ, सबैको राम्रै साथ सहयोग र सल्लाह पाइरहेका छौँ ।
राष्ट्रलेसमेत उचित ध्यान पुर्याउन नसकिरहेकाबेला एउटा व्यक्तिको पहलमा यति ठूलो प्रतियोगिता सम्भव भएको छ, क्रिकेटमा यतिधेरै लगाव कसरी आयो ?
म सानैदेखि क्रिकेट खेल्न साह्रै मन पराउथेँ । बीचमा अध्ययनका लागि काठमाण्डौं गएँ । सोही समयमा देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेकाले धनगढी आउँदा पहिलेकोजस्तो क्रिकेटको माहोल देखिन र मनमा धनगढीमै क्रिकेटको क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलायो । काम गर्दै जाँदा यो खेल खेलमात्र नभएर राष्ट्रलाई नै माथि उठाउने गौरवशाली काम रहेछ भन्ने बुझियो । त्यसपछि मैले धनगढीमा क्रिकेटका गतिविधी बढाउने हो भने आर्थिक रुपमा आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचेँ । त्यसपछि हामीले धनगढीमा फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने योजना तयार गरेका छौं । हामीले चालिस हजार दर्शक अट्ने फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्यौ भने चालिस हजार दर्शकले एक हजारको मात्रै टिकट काटेर क्रिकेट हेर्ने हो भने गेटपासबाट मात्रै चार करोड प्रत्यक्ष आम्दानी गर्न सकिन्छ । केही मान्छे रोजगारी पाउँछन् । क्रिकेट हेर्न यस क्षेत्रमा पुगेका दर्शकहरु मध्ये केहीले पर्यटकीय क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्नेछन् । यहाँका होटेलहरुमा बस्नेछन् । फाप्ला मैदानको आसपासमा सौराहा जस्तै बस्ती बस्नेछ र धेरै मान्छे आत्मनिर्भर हुनेछन् । कैलालीमा क्रिकेट खेलकै माध्यमबाट अर्बौंको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यही स्टेडियमको दवावले सुदूरपश्चिममा अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल छिटो भन्दा छिटो बनाउन दवाब पुग्नेछ, भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यस्ता किसिमका क्रियाकलापले सुदूरपश्चिममा अदृश्य रुपमा धेरै विकास हुने अपेक्षा छ र सो अपेक्षालाई फत्ते गर्न हामी लागिपरेका छौं । यसकालागि हामीले यस क्षेत्रका जनताहरुबाट सहयोग पाइरहेका छौं र सँधै सहयोगको अपेक्षा पनि राखेका छौं
देशको राजधानीले क्रिकेटबाट उचित लाभ उठाउन सकिरहेको छैन, तपाईंहरु यति सुदूरमा हुनुहुन्छ, कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मैले नेपालमा क्रिकेटको एकदमै राम्रो सम्भावना देखेको छु । समयम-समयमा निकै माथिल्लो स्तरका खेलहरु भइरहेका छन् । धेरै खेलाडीहरु यसै डिसिएलबाट व्यवसायिक बन्दैछन् । हामीले एउटा एकेडमीबाट भएपनि यस्ता कामहरु गरिरहेका छौँ । अन्य क्षेत्रमा पनि क्रिकेट विकासका लागि यस्ता कामहरु हुने हो भने निकै ठूलो भविष्य छ । श्रीलंका हेर्नुस् नेपालभन्दा सानो देशको, विश्व क्रिकेटमा उसको कुन स्थान छ, हाम्रो किन नहुने ? राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेलाडी र अम्पायर धनगढी आउन खोजिरहेका छन् । कमजोर मानसिकता बनाएनौँ भने हामी सक्छौं भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । ठूलो सोच बनाउँदा ठूलो सफलता पाईन्छ । क्रिकेटलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसले ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ ।
नेपालको क्रिकेट क्षेत्रमा के कस्ता समस्या र चुनौती देख्नुहुन्छ ?
नेपालको क्रिकेट क्षेत्रमा म त कुनै समस्या र चुनौती नै देख्दिनँ, देख्छु त केवल सम्भावाना नै सम्भावना । समस्या त केवल हाम्रो सोचमा मात्र छ, त्यो परिवर्तन हुनु जरुरी छ । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरुलाई किताबी ज्ञानमात्र दिनुभन्दा विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अभिभावकहरुले पनि आफ्ना बालबालिकाको मनोकांक्षा बुझी सोही अनुरुपका क्रियाकलापमा सहभागी गराउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र त्यस बच्चाले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । इच्छा विपरित क्रियाकलापमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रा सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीको प्रतिभा अनुकुलको चाहनाअनुसार जान दिनुपर्छ । चुनौती होलान चुनौती बिनाको काममा आन्नद र सन्तुष्टि पनि छैन । बच्चा पढाइमामात्र टप होस भन्दा पनि उसको प्रतिभा र सीप अनुसार जान दिनुपर्छ ।
सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी क्रिकेट लिग (डिसिएल)मा सहभागी टिम र खेलाडीहरु:
खेलाडीहरु: राजु रिजाल (कप्तान), नरेश बुढाऐर, सुनिल धमला, रोशन अधिकारी, महेश अधिकारी, विजय राना, न्युरिन अन्सारी, युवराज थापा, टेकेन्द्र बोहरा, अमित साहु, अमित बुढा, अमन भण्डारी, विप्लब विष्ट, सुरेश भट्ट, प्रकाशजंग कार्की, भोजराज भट्ट, प्रेम आउँजी ।
मालिक- कुवेर शाही
विक्रम ठगुन्ना (कप्तान), दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विनोद लामा, ज्ञानेन्द्र क्षेत्री, भिम सार्की, प्रकाश थापा, हृसव देवकोटा, दिपेन शर्मा, मनोज ठगुन्ना, आयुब चन्द, बसन्त थापा, बसन्तसिंह कार्की, अमित पडाल, किरण चन्द, ललित बम ।
पदम केसी (कप्तान), भुवन कार्की, योगेन्द्र कार्की, यम कार्की, सोनु तामांग, दिपेन्द्र थापा, विपिन रावल, अमन पन्थि, सन्दिप जोरा, दिपेश चन्द, प्रदिप केसी, एमपी सिंह, अर्जुन सावँद, किरण ठगुन्ना, पवन कार्की, अम्बादत्त जोशी ।
मालिक- नरबहादुर राई
भुवन केसी (कप्तान), विनोद भण्डारी, मेहबुव आलम, प्रेम तामांग, सुरेन्द्र चन्द, विशेष सिंह, नबिन भण्डारी, नरेश बोहरा, ज्ञानेन्द्र कुवँर, पुरन थापा, दिपक खत्री, सञ्जय पन्त, अस्फाक अन्सारी, हिक्मत सेठी ।
मालिक- दीपक खड्का
रोमन बम (कप्तान), चन्द्र सावँद, ललित भण्डारी, राजन शेरचन, सागर भण्डारी, आशिष बम, रवीचन्द, लोकेश बम, सन्तोष भट्ट, राम रावल, पारस रावल, प्रकाश सिंह ऐरी, अमर धानुक, सरोज ऐर, शिवराज ऐर, नारायण जोशी ।
– सुदुर डेली दैनिकबाट